Apple ayaa dhirbaaxday curcurka ka dib markii ay diidday adeegsiga shabakada bulshada ee Parler | Waxaan ka socdaa mac
Apple ayaa dhirbaaxday curcurka si ay u diiddo isticmaalka shabakadda bulshada ee Parler
Markii uu xukunka hayay Donald Trump, waxyaabo badan oo kala duwan ayaa dhacay qaar badan oo ka mid ahna waxay leeyihiin dhadhan dhaqan xumo. Kii ugu dambeeyay wuxuu ahaa jagada madaxweynihii hore iyadoo xaquuq ba'an ay dalka kajirto. Tani waxay horseeday shabakadaha bulshada qaarkood ee ay adeegsadaan kooxahan in laga xannibo shirkadaha waaweyn ee teknolojiyadda sida Apple, Google, Amazon ama Twitter. Si kastaba ha noqotee, waxaan helnaa xariiqa wanaagsan ee ka soocaya xorriyadda hadalka. Hadda Senator Mareykan ah Mike Lee oo ka socda Utah iyo Congressman Ken Buck, waxay dhaleeceeyaan ficilada Apple iyo kuwa kale.
Waxaan isku dayi doonaa sharax wax kasta oo dhacay, oo macnaha guud galiyay.
1 Waa maxay Parler maxaase shirkadaha waaweyn ee tikniyoolajiyadu u xidheen?
2 Senator iyo Xildhibaan ayaa dhagaha ka jiidaya Apple, Google iyo Amazon dhagaha maqalka Parler
Waa maxay Parler maxaase shirkadaha waaweyn ee tikniyoolajiyadu u xidheen?
Maamulaha shirkada Parler
Bishii Janaayo ee sanadkan, Google, Amazon iyo Apple waxay veto ku diideen Parler suuqyadooda. Shabakada bulshada ee iskeed isu taagtay sida qalab loogu talagalay gudbinta mowqifka xisbiyada midig-fog iyo kuwa beeniya. Parler ma uusan bilaabin xirfadiisa sanadkaan. Wuxuu horey u lahaa taariikh dheer oo khilaafaadyo ah oo ka bilaabmay 2018 John Matze iyo Jared Thomson. Laakiin waxay ahayd bilawgii sanadkan markuu xoojiyay booskiisa, kadib dhacdooyinkii ka dhacay Congress-ka.
Dhowr qof (kuwa raacsan Trump oo aan rabin inay quus ka dhigaan awoodda) waxay go'aansadeen inay ku duulaan Koongaraska Mareykanka, mid ka mid ah weeraradii ugu weynaa ee lagu qaado dimuqraadiyadda adduunka casriga ah. Twitter-ka ayaa go aansaday in la joogo waqtigii la diidi lahaa isgaarsiinta ka dhexeysa xubnaha ku howlan weerarka. Sababtaas awgeed, inta badan kuwa raacsan ee xaqqa daran waxay go'aansadeen inay bilaabaan adeegsiga Parler.
Ma ahayn markii ugu horreysay ee taageerayaasha Trump ay kor u qaadaan baraha bulshada. Bishii Nofeembar 2020, iyo luminta murashaxnimada iyo tweets-ka ayaa la tirtiray musuqmaasuq doorashada awgeed, tirooyinka Shirkadda Parler ayaa labanlaabantay 10 milyan oo isticmaale dhawr maalmood gudahood. Waxaa loo xaqiijiyay, qaabkan, inuu yahay shabakada bulshada ee muxaafidka iyo cod-bixiyeyaasha midig-fog. Laakiin waa inay sidoo kale ku biireen koox kale oo dagaalyahan ah oo leh xaaladda hadda jirta: Beeniyeyaasha, oo aan aqbalin tallaabooyinka nadaafadda ee fayadhowrka ee ay soo rogeen mas'uuliyiinta qaranka iyo kuwa maxalliga ah ee ka dhanka ah COVID-19. Waxa badanaa la dhaho: Waxay ku biireen gaajo rabitaan ah inay wax cunaan.
Marka la eego guuritaanka isticmaaleyaasha ee shabakadda bulshada iyo maadaama aysan jirin tallaabooyin amni ama xakameyn milkiilayaasha Parler, Google ayaa ku dhawaaqday go'aanka diidmada qayaxan ee dukaanka. Wax yar ka dib, Apple wuxuu ku biiray sheegashada shirkadda Amazon. Amazon waxay laheyd furaha maxaa yeelay waxay ahayd adeegeyaashooda ay isticmaaleen, sidaa darteed Parles gabi ahaanba way naafowday. Dusha sare ee Ahraamta ee dhammaan waallidan, waxay ahayd jabsiga weyn ee keydka macluumaadka shabakadda bulshada. 70TB xog ah waa la kashifay, oo ay ku jiraan dukumiintiyada aqoonsiga oo leh magacyo, cinwaanno iyo faahfaahinta xiriirka.
Waxaas oo dhan waa loo xiray, laakiin hadda waxay umuuqataa inaysan sifiican uqaban.
Senator iyo Xildhibaan ayaa dhagaha ka jiidaya Apple, Google iyo Amazon dhagaha maqalka Parler
The senator-ka Mareykanka Mike Lee oo ka tirsan Utah iyo Congressman Ken Buck waxay u direen warqad wadajir ah Maamulayaasha Apple, Google iyo Amazon si ay wax uga weydiiyaan ficilada shirkadaha ee ku saabsan ka saarida shabakada bulshada ee Parler dukaamada barnaamijyadooda iyo adeegyada martigelinta ee webka horaantii sanadkan.
Waqtiga ay ficilada ka dhanka ah shabakada bulshada ee Parler ee shirkadaheeda iyo in talaabooyinka ay u muuqdaan in ay ka maqan yihiin mid ka mid ah cadaalada habsami u socodka ee sida caadiga ah la bixiyo haddii ay dhacdo jebin qandaraas la sheegayo ayaa abuureysa muuqaalka isuduwidda dhow. Falalkani waxay ahaayeen cKa dhanka ah shirkad aan lagu eedeyn inay ku xadgudubtay sharci kasta. Xaqiiqdii, macluumaadka uu siiyay Parler Guddiga La-socodka Golaha ayaa shaaca ka qaaday in Goluhu uu caawinayay fulinta sharciga xitaa kahor Janaayo 6.
Amazon qaybteeda keydka server waxay joojisay la shaqeynta Parler sababtoo ah awood la'aanta inuu wax ka beddelo waxyaabaha rabshadaha wata. Parler wuxuu ku soo laabtay internetka bishii Febraayo iyada oo martigelinta ay bixisay SkySilk iyo qaab kale oo rakibid ah ayaa hadda la siiyay dadka isticmaala Android. Laakiin maaha Apple.
Muranka ayaa loo adeegsaday iyo muranka sidoo kale. Waraaqda ay soo direen siyaasiyiintu waxaa ku jira su’aalo badan oo ay tahay inay shirkadaha ay khuseyso ka jawaabaan. Jawaabaha iyaga lafaguri doonaan iyagaana go'aan ka gaari doona haddii go'aanka ugu dambeyn si fiican loo qaatay iyo in kale. Su'aal inkasta oo ayna ku dambayn inay ku xirnaato Apple haddii ay keeni karto xoogaa xanaaq la'aan heerka garsoorka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » dhowr » Apple ayaa dhirbaaxday curcurka si ay u diiddo isticmaalka shabakadda bulshada ee Parler
Xogta in ka badan 500 milyan oo isticmaale Facebook ah, ayaa si qarsoodi ah uga dillaacday internetka
Saxeexa cusub ee Apple ayaa xitaa daryeel dheeri ah ka bixin doona caafimaadkeena